Apple wepụtara Safari Technology Preview 137 | Esi m mac
Apple weputara Safari Technology Preview 137
Ụdị ọhụrụ nke ihe nchọgharị Safari Technology Preview nke ihe nchọgharị ahụ, na nke a ruru 137. N'ime ụdị ọhụrụ a, a na-agbakwunye nkwalite ya na nkwụsi ike ya na ịrụ ọrụ ya, na, dịka ọ dị na mbụ, a na-edozi ahụhụ ndị achọpụtara na ụdị ewepụtara ihe dị ka afọ abụọ gara aga. . Ụdị ihe nleba anya Safari Technology 135 bịara na nkwado maka ihe nkiri mpịakọta 120Hz, nke na-enye mpịachi dị nro karịa mgbe ị na-eji ihe niile na-eme nchọgharị na ibe weebụ. ụdị nke ọhụrụ 2021 MacBook Pro nso.
Nke a bụ a Independent na kpamkpam free nchọgharị Onye ọ bụla nwere Mac nwere ike iji ya, ndị ọrụ ndị ọzọ na-anwale ihe nchọgharị a, ka nzaghachi Apple na-anata iji chọpụta nchinchi ma tinye mmezi ndị dị mkpa. Apple na-eche echiche nke ọma na ihe nchọgharị ule a na izu abụọ ọ bụla anyị nwere ụdị ọhụụ dị. O yiri ka obere mgbanwe na ndozi etinyere na nke ọ bụla na nsụgharị melite nchọgharị.
Ọzọkwa, dị ka anyị na-echeta mgbe niile na mmelite ndị na-abata maka Safari Technology Preview, ọ bụ ịwụnye ihe nchọgharị ahụ ọ dịghị mkpa ịnweta akaụntụ onye nrụpụta ma ọ bụ ihe yiri ya, Onye ọ bụla nwere ike ibudata n'efu iji nwalee na Mac. Ihe niile anyị ga - eme bụ ịnweta weebụsaịtị wepụtara wee budata ụdị nke kachasị ọhụrụ Nyocha Safari Technology. Ka ndị ọrụ na-anwale ihe nchọgharị a, ka Apple na-enwetakwu nzaghachi iji chọpụta chinchi ma tinye mmezi ndị dị mkpa na nsụgharị ndị a nke ihe nchọgharị gọọmentị nke Mac niile arụnyere dị ka ọkọlọtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Apple weputara Safari Technology Preview 137
27-inch iMac na Obere-LED ngosi na-abanye na mmepụta
2nm Mac M4 mgbawa na-abịa na ọkara nke abụọ nke 2022 na ọ gaghị abịa naanị ya